Ingozi yamarabi khona lana eMvoti | News24
Ingozi yamarabi khona lana eMvoti
Kulenyanga edlule, uFebruari, inkomo eyodwa, nezinja ezimbili zihloliwe, zatholwa zinamarabi. Sicela ukuthi bonke abomphakathi bahlale bayiqaphele lento, ukuba sizivikele ukuthi nathi singakutholi ukufa lokhu okubi kakhulu. Landela imithetho njenga siyithola kodokotela abazaziyo izinkinga ezihambisana nokufa kwamarabi: Okuhamba phambili impela yilokhu - uma wena unazo izinja noma amakati, kufanele ubhekisise ukuthi izilwane lezi zigonyiwe ngokufaneleyo.
Umdlwane ugonywa uma enezinyanga ezintathu, kuphindwe futhi uma sekuphele unyaka wokuqala. Ngemva kwalokhu kufanele ukuba izilwane zigonywe njalo ngemva kweminyaka emithathu. Okungcono kakhulu ukugoma njalo ngemva kwonyaka owodwa uma ukwazi ukwenza lokho, kodwa uma kungalungi lokho ukugoma ngemva kweminyaka emithathu nakho kuyasiza.
Kufanele ukuba umnikaziyo wenja ezimisele yena ukuthi ahlale aqaphele ukuthi izinja zakhe zigonywe njalo ngendlela efaneleyo. Uma inja yakho iluma umuntu umthetho udinga ukuthi ukwazi wena mnikaziyo ukufakaza ngephepha elivela kudokotela wezilwane, ukuthi inja yakho igonywe ngendlela efaneleyo.
Uma inja itholwa ukuthi ithinteke ngamarabi izobulawa ngokwomthetho, ngoba isuka isiyingozi emphakathini, uma ingagonyiwe.
Konke lokhu kukhomba ukuthi kusemqoka ukuthi izinja zonke zigonywe ngokwomthetho sonke isikhathi.
Athelelana kanjani amarabi?
Amarabi athelelana ngendlela yokuthi isilwane esinamarabi siluma esinye isilwane, noma kungaba yinja, noma esinye isilwane.
Igciwane lamarabi lihlala ebucoshweni noma ematheni noma emgogodlweni wesilwane. Kufanele ukuba umuntu aqaphele ukuthi angazithinti lezizindawo esilwaneni uma esola ukuthi kungenzeka ukuthi sinamarabi. Kungaba isilwane esifile noma esiphilayo.
Yiziphi izimpawu ezikhombisa ukuthi isilwane sinamarabi? Inja ikhombisa ngalezi zindlela ukuthi mhlawumbe inamarabi: Ngokujwayelekile iyazula, inolaka futhi iconsa amathe; ezinye ziyabonakala ukuthi ziyagula azisakwazi ukuhamba kahle, ihamba sengathi ikhubazekile.
Izinkomo zikhombisa ngalezi zindlela ukuthi zithelekile: uma zihlala zibhonge, noma zikhombisa ulaka, ziconsa amathe, imilenze ayinawo amandla noma azikwazi ukuphuza amanzi.
Uma kukhona eminye imininingwane odinga ukuyithola, sicela uthintane udokotela wezilwane oseMdlovane u-Dr. Isla Mackellar, wase-Umvoti Animal Hospital ku-Durban Street, 0334172073 / 0846438972 noma ungathintana noDan Mosadi (Control Animal Health Technician - osebenza esikhundleni kwezempilo zezilwane) - 071 687 5567.